ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက် - Rakhine Commision
ပြောင်းလဲမှု ဘာသာစကား Change to English
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ ထုတ်ပြန်ချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာအကြံပေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် တိုက်ခိုက်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ သေဆုံးခဲ့ကြသူများ၊ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြသူများ၏ မိသားစုများအား ကော်မရှင်မှ အထူးပင် ဝမ်းနည်းစာနာမိပါသည်။
ရခိုင်ပြည်သူလူထု အေးချမ်းသာယာမှုရှိရေး၊ လုံခြုံမှုရှိရေး၊ ရသင့်ရထိုက်သည့် အခြေခံအခွင့်အရေးများ ရရှိရေးနှင့် ရခိုင်ဒေသအတွင်း စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိရေးတို့အတွက် ကော်မရှင်အနေဖြင့် မိမိတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သတ်မှတ်ပေးထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အညီ ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Publications, News and Media
General and Press Contact
The Advisory Commission on Rakhine State was founded asaneutral and impartial body which aims to propose concrete measures for improving the welfare of all people in Rakhine state. It is composed of six local and three international experts, and is chaired by Kofi Annan.
Chairmain of the Kofi Annan Foundation and former Secretary-General of the United Nations.
U Win Mra
Chair of the Myanmar National Human Rights Commission
Dr. Tha Hla Shwe
President of Myanmar Red Cross Society
Core Member and Founder of Religions for Peace, Myanmar
Dr. Mya Thida
President of Obstetrical and Gynecological Society of MMA and Member of Myanmar Medical Science
U Khin Maung Lay
Member of the Myanmar National Human Rights Commission
Daw Saw Khin Tint
Chair of the Rakhine Literature and Culture Association, Yangon and Vice-Chair of the Rakhine Women Association
International Member of the Commission
Laetitia van den Assum
Ambassador Laetitia van den Assum retired from the Netherlands Ministry of Foreign Affairs in 2016 afteralong and distinguished career in international affairs.
[ logos ]
© 2016 Kofi Annan Foundation. All Rights Reserved.